September 27, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha September 27, 2020
(Barcelona) 27 Sebt 2020. Barcelona ayaa xaaqday kooxda Villarreal oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, xilli Blaugrana ay gacanta ku dhigtay saddexdeeda dhibcood ugu horeysay horyaalka La Liga ee kal ciyaareedkan cusub 2020/21. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 4-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa […]Sii akhriso
(Barcelona) 27 Sebt 2020. Kooxda Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou ku soo dhaweyn doonto naadiga Villarreal, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada Isbuuca Saddexaad ee horyaalka La Liga dalka Spain. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Barcelona iyo Villarreal ee horyaalka La Liga dalka Spain. SAFAFKA […]Sii akhriso
(England) 27 Sebt 2020. Leicester City oo guul ay u qalantay kaga soo heshay kooxda Manchester City garoonka Etihad, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 2-5, xilli Leicester ay guul gaartay kulankeeda saddexaad ee xiriir ah horyaalka Premier League, kal ciyaareedkan 2020/21. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah ay isku dhaafi […]Sii akhriso
Soomaaliya September 27, 2020
Muqdisho.(SONNA):- Xildhibaanada golaha shacabka ee barlamaanka jamhuuriyada federaalka Soomaaliya ayaa maalinta berri ah waxaa ay ka doodi doonaan sharciyo dhowr ah. Kulanka berry ayaa ah kulan weynaha golaha waxaana ajandayaasha ay kala yihiin . Akhrinta koowaad ee Hindise sharciyeedka dhismaha Haya’adda diiwaangelinta dadweynaha iyo bixinta aqoonsiga oo ay soo Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa maanta kala saxiixday heshiiska deyn cafinta, Hesiiskan oo ka dhacay safaaradda Mareynkanka ee Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ka cafisay qeybtii uga soo aadday deyn cafintii dalalka Sii akhriso
Somali News September 27, 2020
Mogadishu (SONNA)-Today U.S. Ambassador Yamamoto and Somali Minister of Finance Beileh met in Mogadishu and signed a bilateral agreement to reduce and restructure debt owed by the Federal Government of Somalia (FGS) to three U.S. government agencies. Signing this agreement was possible because Somalia has implemented significant economic reforms in recent years and in Sii akhriso
Suspension of US aid to Ethiopia is yet another example of Trump’s disregard for Africa – The Conversation Africa
Ethiopia News September 27, 2020
Suspension of US aid to Ethiopia is yet another example of Trump’s disregard for Africa The Conversation AfricaSii akhriso
(England) 27 Sebt 2020. Markaad ka fikirto laacibka ugu TAAJIRSAN kubbada adduunka waxaa durba kugu soo dhacaya sida Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Neymar, balse sidaas maaha sheekadu oo xiddiga ugu hodansan waa 22-jir ka tirsanaa kooxda keydleyda ee Leicester City, balse ugu dambeyn ka tagay kooxdaas. Kooxda Premier League ka dhisan ee Leicester City […]Sii akhriso
(England) 27 Sebt 2020. Kooxda Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad ku soo dhaweyn doonto naadiga Leicester City, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada Isbuuca Saddexaad ee horyaalka Premier League Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Manchester City iyo Leicester City ee horyaalka Premier League. SAFAFKA RASMIGA Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Ra’iisul wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukumadda tayo leh oo awood uleh dar dar gelinta howlaha hortabinta leh ee horyaala dowladda . “Waxaan soo dhisi doonaan xukumadda tayo leh oo ka shaqeyn doonto howlaha hortabinta leh ee hortaayala xukumadda si aan ugaarno Sii akhriso